Samsung dia manambara ny Gear S3 vaovao miaraka amin'ny GPS sy LTE | Androidsis
Samsung dia nanambara ny Gear S3 vaovao miaraka amin'ny GPS sy LTE
Mbola misy herinandro latsaka ny hetsika Apple hatao ao, ankoatra ny fantsom-baovao iPhone 7 sy iPhone 7 Plus vaovao, dia azo inoana koa fa hanolotra ny taranaka faharoan'ny smartwatch. Ary manararaotra an'ity toe-javatra ity, ilay mpifaninana aminy lehibe indrindra, Samsung, nanolotra ny smartwatch vaovao, ny Samsung Gear 3.
Ny Gear 3 no fitaovana azo akanjo vaovao an'ny orinasa Koreana Tatsimo. Ho misy amin'ny karazany roa: maodely "Klasika" izay manana Bluetooth sy Wi-Fi, ary ilay maodely antsoina hoe "Frontier" izay manana fifandraisana LTE. Ankoatr'izay, ny maodely roa dia misy GPS mifangaro.
1 Gear S3, ilay smartwatches Samsung vaovao mifanaraka amin'ny iOS
1.1 Samsung Pay, barometre, tantera-drano ary maro hafa
1.2 Vidiny sy misy
Gear S3, ilay smartwatches Samsung vaovao mifanaraka amin'ny iOS
Ny Gear 3 Frontier dia natolotra ho maodely matanjaka indrindra amin'ny taranaka vaovao. Ny efijery Super AMOLED dia misy ny haitao "mandeha foana". Ary amin'ny fifandraisana LTE, azonao atao ny mamaky angon-drakitra haingana mba hilalao hira avy amin'ny serivisy mivantana mozika toy ny Spotify.
Ireo maodely roa an'ny Samsung Gear S3 vaovao dia mampiseho endrika mitovy amin'izany, miaraka amin'ny matevina Trangam-by 46mm sy bezel mihodina nolovaina tamin'ny taranaka teo aloha. Amin'ny alàlan'ity bezel mihodina ity, ny mpampiasa dia afaka mifanakalo eo anelanelan'ny endrika fiambenana misy hafa ary misafidy ireo rindranasa.
The Gear S3 mampiasa fehy famantaranandro 22mm mahazatra noho izany dia mifanaraka amin'ny fehikibo fahatelo izy ireo. Ary ao anatiny no miafina a Bateria 380 mAh fa raha ny filazan'ny orinasa, dia afaka mitazona hatramin'ny efatra andro eo anelanelan'ny entana sy ny entana.
Samsung Gear S3 dia misy amina endrika roa sahy mifanaraka amin'ny fomba fiainan'ny mpampiasa: Frontier sy Classic. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny mpikaroka mpikaroka, ny Gear S3 Frontier dia mampihetsi-po ny endrika ivelany mibaribary amin'ny fomba maharitra izay mifangaro endrika sy fiasa. Ny Frontier dia natao hampiasaina amin'ny toerana na tontolo iainana, na orinasa izany na fahafinaretana. Ny Gear S3 Classic dia manome voninahitra ny fomba manja sy minimalist hita amin'ny famantaranandro ikalaza. Ny Classic dia noforonina tamin'ny fandinihana tsara ny antsipiriany - miaraka amin'ny habeny sy ny endriny voafidy hahatratrarana fitoviana sy fandanjalanjana amin'ny famantaranandro lafo vidy vita tsara.
Samsung Pay, barometre, tantera-drano ary maro hafa
Ny fiasa hafa natsangana ho an'ny Gear S3 Classic sy ny Gear S3 Frontier dia ahitana ireo fiasa izay efa fahita amin'ny smartwatches an'ny fianakaviana Gear rehetra, ny sasany amin'izy ireo dia ny fanarahan-dia ara-batana, tsy tantera-drano IP-68 voamarina, fanoherana ny kilasy miaramila, barometatra ary hafainganam-pandeha, tohana ho an'ny Samsung Pay, NFC, mpandahateny.
Ny Gear S3 koa dia mampiasa ny teknolojia vaovao mahery vaika Corning Gorilla Glass SR +.
Ny smartwatches vaovao an'ny Samsung dia mampiasa ny Rafitra fiasa Tizen. Mbola havoaka ihany koa ny fanavaozana ny lozisialy vaovao ho an'ny Gear S2, ilay taranaka taloha tamin'ireny smartwatches ireny.
Mikasika ny vidiny sy ny daty famoahana ireo maodely smartwatch Gear S3 an'ny Samsung dia mbola tsy nanome fampahalalana momba izany ny orinasa. Na izany aza, antenaina hamidy any Etazonia izy ireo amin'ny faran'ity taona ity.
Herinandro monja izao dia antenaina ny Apple hampiditra ny taranaka faharoa amin'ny smartwatch, ny Apple Watch. Ny tsaho dia milaza fa ireo fitafiana mitafy ireo dia hitazona endrika mitovy amin'ireo maodely naroso efa ho roa taona lasa izay. Ny fanatsarana dia ho avy ao anaty amin'ny alàlan'ny processeur haingana kokoa, batterie tsaratsara kokoa ary GPS namboarina, saingy tsy misy fiovana antenaina antenaina.
Etsy ankilany, nisy solontena Samsung niresaka tamin'i SamMobile nanome toky fa Ny Gear S3 dia hifanaraka amin'ny Apple iPhone, angamba amin'ny alàlan'ny fampiharana manokana izay eo am-pamolavolana ho an'ny fitaovana iOS.
Ity singa ity, miaraka amin'ny hafa toy ny vidiny na ny zava-baovao amin'ny famantaranandro Apple, dia mety hanomboka hampandanja ny fifandanjana amin'ny lafiny Samsung.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung dia nanambara ny Gear S3 vaovao miaraka amin'ny GPS sy LTE